घर निर्माण खर्च – Purna Oli
मनोरञ्जन स्वविकसित सफ्टवेयरहरु
October 2, 2016 July 6, 2017 Purna Oli	0 Comments
के तपाईँले सामान्य खालको पक्की घर बनाउने सोच राख्नुभएको छ ? के तपाईँलाई घरमा लाग्ने निर्माण सामग्री, लागत तथा हालसालैको निर्माण सामग्रीको मूल्य बारे जान्न चाहनुभएको छ ? छ भने तलको फाइल खोलेर हेर्नुहोस् र आफ्नो जिज्ञासा मेटाउनुहोस् । लागत तथा मूल्य काठमाण्डौको मूल्यमा आधारित छ । काठमाण्डौँभन्दा बाहिरको स्थानको लागि ढुवानी खर्च जोड्नु पर्ने हुन्छ ।
यसमा क्लिक गर्नुहोस् ⇒ construction2
← आउनुहोस् ! रमाइलो तरीकाबाट संस्कृत सिकौँ !!
एक्सेलका आधारभूत सूत्रहरु →